सर्लाहीबाट ३ अर्ब रुपियाँको तरकारी निकासी - कृषि पत्रिका
सर्लाहीबाट ३ अर्ब रुपियाँको तरकारी निकासी
आइतबार ०४ असोज, २०७७	comments
सर्लाही । यस जिल्लाको लालबन्दीबाट मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रू. ३ अर्बभन्दा बढीको तरकारी निकासी भएको छ । लालबन्दी, ईश्वरपुर र हरिवन नगरपालिकालगायतका छिमेकी स्थानीय निकायबाट मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ मा रू. ३ अर्ब १८ करोड २६ लाख ८० हजारको तरकारी निकासी भएको हो ।
परम्परागत अन्नबाली छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेका सर्लाहीबासीले करीब १ हजार बिघा जमीनमा तरकारी खेती गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाले बताएको छ ।